Cunnoxumaanta da’yarta | Suomen Mielenterveysseura
Liisa waa 15 jir, waa gabar iskooley ah si firifrcoona u xiiseysa ciyaaraha. Hiwaayaddeeda waxaa soo raaca waxay galab walbi si joogta u aadaa orod rucleyn ah. Liisa aad ayay u caatoowday sanadadii dambe. Markii reerku wada cunteeynaya ugu badnaan in yar ayay ka taataabaddaa. Markii waalidkeed ka hadlo cuntoxumideeda, waxay tiraahdaa waxaan wax ka soo cunay iskoolka ama hiwaayadda kadib ayaan wax soo cuney oo ma awoodo inaan guriga ka cunteeyo.
Liisa waxay rabtaa oo jeclaan lahayd, inay ahaan lahayd qof qurxoon oo soojiidasho leh haddii ay intaas ka sii caatoobi lahayd. Dhanka kale waa qof tabardarran oo ay waxbarashadu ku adag tahay. Marmar waxay wax u cuneysa si aad u badan oo macquul ahayn, waxayna baahi weyn u qabtaa nacnaca iyo jalaatada. Mararka qaarkood markay baahooto kadib oo ay wax badan cunto dabadeed way soo mantagtaa.
Maxaa la gudboob Liisa iyo reerkeeda iney sameeyaan?
Waalidku waa inuu Liisa wadahadal kala yeeshaa iscaateynta iyo wax cunid xumida. Wadahadalka wanaagsan ee loo baahan yahay waa in waalidiintu si deggen oo saxiibtinimo leh u hadlaan, loomana baahna xukun iyo wacdi. Liisa waa iney fahamtaa in haddey aysan muddo dheer wax fiican cunin, iney haligeyso nafteeda. Tusaale ahaan hoormonada koritaanka, lafaha, kalagosyada iyo ilkaha intaba koritaankoodu waa muhiim in da’yartu helaan nafaqo ku filan. Tamar yarida Liisa waa mid horseedi karta in dhimirkeedu xumaado.
Cuntoxumida Liisa kadib waalidku waxaa wanaagsanaan lahyd inuu wadahadal kala yeesho gabiahaan xaaladda nolosheeda. Miyay jiraan waxyaabo kale oo Liisa dhib kuhaya marka laga reebo cuntixumida? Iskoolka ma lagu dhibaa ama miyay niyadjabsan tahay? Waa sidee dareenkeeda, miyay jiraan wax farxad gelinaya Liisa nolosheeda? Miyay Liisa garaneysaa arrimaheeda waxay ku fiican tahay? Waa sidee xaaladda dhanka guriga? Waa xaalad noocee ah dhanka guriga oo ay Liisa uga hadli karto si furan dhibaatooyinkeeda?
Iscaateynta Liisa waxay isubeddeleysaa mid faraha ka sii baxeysa oo laga yaabo inuu ku dhaco dhib cunnodiidnimo. Iscaateynta, cuntoboobidda iyo jirdhiskan xad dhaafka ah waxaa laga yaabaa Liisa iney ka gudubto, laakiin haddii ay muddo siiwado caafimaadkeeda ayay wax u dhimayaan. Inta badan cunnodiidnimadu waxay ku bilaabataa si tartiib ah iyo markiisa horeba waxay ahayd hiwaayad fiican oo jimicsiga jirka ah oo isu bedeshay dhowr bilood kadib wax waajib ah. Cunnodiidnimada markey timaato waxaa wanaagsan isla markiiba la joojiyo. Sii socoshadeeda muddo dheer waxaa adkaaneysa ka soo kabshadeeda.
Iscaateynta iyo cuntoxumida xad dhaafka ah waxaa habboon in caawinaad laga doono dadka aqoonta u leh goor hore. Caawinaad raadinta waxaa laga bilaabi karaa tusaale ahaan si wadahadal ah kalkaaliya caafimaadka iskoolka, takhtarka caafimaadka ee iskoolka ama saykolojiga iskoolka. Xitaa takhtarka rugta caafimaadka ama takhaatiirta khaaska waa wanaagsan tahay in caawinaad loo doonto. Liisa waa ay wanaagsanaan layahy in ay xoogaa eegto ururka Syömishäiriöliitto SYLI ry boggooda internetka oo laga helayo macluumaad badan oo la xiriira cunnodiidnimada iyo isla markaana aad kahadli karo xaaladdaada.
Inta badan daryeelku wuxuu noqonayaa nooca loo yaqaan caawinaadda furan. Liisa waxay heli kartaa caawinaad wadahadal, cunto kala talinta, jimicinta jirka ama carbinta jirka 1-3 jeer usbuucii muddo 1-3 sano ah. Liisa waxaa wanaagsan in lagula taliyo iney raadiso oo ka qeyb qaadato tusaale ahaan kulamada wadajirka ah dadka qaba xanuunada dhimirka iyo cunnodiidnimada.
Cunnodiidnimada waa in loo helaa daryeel xooggan oo sida ugu dhaqsiyaha badan in loo raadiyo daryeel si looga kabsado. Xitaa Liisa waalidkeed iyo walaalaheed waxa wanaagsan iney kala hadlaan xaaladdeeda caafimaad qolyaha aqoonta u leh arrima caafimaadka. Qof qoyska ka mid ah oo qaba connodiidnimo wuxuu saameyn xoog leh ku yeelan karaa qoyskoo dhan. Qolyaha daryeelka qoyska waxa marmar laga heli karaa caawinaadda cunnodiidnimada.
Haddii Liisa xaaladdeeda caafimaad liidato oo ay nafsadeeda iyo jirkeeduba khatar galaan, takhtarka wuxuu u diri doonaa isbitaal. Isbitaalka wuxuu ahaan karaa kan cunnodiidnimada, kan qaybta dhimirka ama qeybta isbitaalka ee Liisa caafimaadka jirkeeda (quudinta) lagu eegayo sidii ay usoo kabsan lahayd.